TTSweet: အနှုတ် ၈၅၀ နှင့် စခဲ့သော ...
ဆုမြတ်မိုး March 6, 2012 at 2:36 PM
very very simple and romance ttsweet :)
yeah..it is true love and i feel you and u chaint 's love. even u started from -850,u guys reach yr destination now. Bravo TTSweet and U Chaint !
အခုတော. အဖတ်တင်သွားပြီလေ။ ဂျုဂျု ဆိုတဲ.ရတနာလေးအဖတ်တင်သွားတာ ဘယ်လောက်ကံကောင်းလဲ။
ခေးကို March 6, 2012 at 2:47 PM
အားကျလိုက်တာ....အဲဒီအိမ်ထောင်မျိုးက ပိုပြီး ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ပြည့်စုံသလိုပဲ.အနှုတ်က ၈၅၀ ဆိုပေမဲ့ အပေါင်းက ၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈ ဆိုတော့ ပိုတောင် ပိုနေသေးပါတယ် တီဆွိရဲ့  :D
AMK March 6, 2012 at 2:56 PM
တီဆွိနဲ့ ဦးခြိမ့် ငယ်ငယ် ကပုံတွေ က ခန့်ချောကြီးတွေပဲ
AMK March 6, 2012 at 3:03 PM
ဦးခြိမ့် လက်မှတ်ထိုးတဲ့ နေ က သွားတွေ ဖြဲနေတဲ့ပုံ ကိုသိပ်သဘောကျတယ် ဟီဟီ
Aunty Oo March 6, 2012 at 3:04 PM
Vista March 6, 2012 at 3:14 PM
ဟားဟား တောသူမကို မလိုချင်လို့ ပြန်လှည့်ပြေးချင်တဲ့ ဆိုတဲ့လူကြီး သွားကြီးကိုဖြည်းနေတာပဲ ဟိဟိ
ROM ပုံထဲက တီတီဆွိက ချစ်စရာလေး...
Mrs. Bagel March 6, 2012 at 4:44 PM
ပြန်လှည့်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့ သတို့သားကိုကြည့်လိုက်တော့ ဖြီးနေတာပဲ။ :D မရှိအတူရှိအတူနဲ့ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ မိသားစုလေးကို အားကျတယ်။ :)
rose of sharon March 6, 2012 at 4:50 PM
အင်ကြင်းသန့် March 6, 2012 at 5:26 PM
ရိုးစင်းသလောက် ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ.... :)
Hello ama! I read the news about NSW.. there are heavy flood. Is ur place is fine?
mgchaint March 6, 2012 at 6:19 PM
ရေကြီးတဲ့ နေရာက Wagga Wagga လို့ ခေါ်တယ်။ ဆစ်ဒနီကနေ အနောက်တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၅၀၀ လောက် ဝေးပါတယ်။ အခုလို စိတ်ပူတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ...။
အနှုတ် ၈၅၀ ဇာတ်လမ်းကို မဆုံးသေးဘူး နဲ့ တူပါတယ်။ ဆွိ တစ်ယောက် ဆက်ရအုန်းမှာ ကျန်ပါသေးတယ်။း)
Anonymous March 7, 2012 at 4:06 AM
ဆက်ပါအုံးဗျိုးးးးးး....ဦးခြိမ့်အမျှော်မြင်ကြီး၏ "တခါတည်းလက်ထပ်ရမည်ဟုဆိုသည်" ဦးခြိမ့်အမျှော်မြင်ကြီး၏ :D :D :D
အန်တီဆွိ သတ္တိရှိ၏ time mgt ကျွမ်း၏ လူကဲခတ်တော်၏.. တကယ်ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချီးကျူးခြင်းဖြစ်ပါသည်
T T Sweet March 6, 2012 at 6:40 PM
အစ်မတို့နေတဲ့ဖက်မှာတော့ ကောင်းပါတယ်။ နေတာကလဲ နဲနဲအမြင့်ပိုင်းရောက်တာရယ်၊ မိုးလဲ အဲလောက်မများတော့ အခြေအနေကောင်းပါတယ်။ ပုံမှန်ပါပဲ။
Tsu ရဲ့ ပို့စ်အဟောင်းတွေမှာထားခဲ့တဲ့ ကွန့်မန့်တွေ အားလုံး ဖတ်ရပါတယ်။ အစ်မအချိန်မရလို့ မပြန်ပေးနိူင်တာ။ ဒီည ပြန်ပေးပါ့မယ်။
hote kae..oh lucky that you all are in safe place (but somehow sorry for those suffer)
its ok ama. Doesn't matter reply or not. Just write new post for us to read :D...
Do u recieve notification at your email if someone post on ur wall? for me, I didn't get any notification email when u reply my post. I am not familiar with blog. I just post with Unkown (Google) in the place of reply as. If you have time kindly teach me how can i get notification of the post. I read all the post and comments in the blog.
However, sometime i could not read for long time due to the red colour font. I love red. If it is possible could you please change to black. It is justarequest. May be you prefer to beaunique color in ur blog.
I am reading ur blog starting from last week until now I not yet finish :) .....
sometime i feel like i want to have my own blog after I read yours and ma shinlay. But somehow i am so poor in writing :P
wish your family to be good health.
ရိုးရှင်းတဲ့ဘ၀ ၊စိတ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းလိုက်တား)
ဖိုးတုတ် March 6, 2012 at 9:21 PM
ROM လက်ထပ်တဲ့နေ.ကဓါတ်ပုံမှာ မဆွိက ကိုရီးယားမင်းသမီး၊ ဂျပန်မလေး အတိုင်းပဲ၊ ကိုခြိမ့်ကတော့ ကံကောင်းတယ်၊ အချော၊ အလှလေးကိုရလိုက်လို.၊
T T Sweet March 7, 2012 at 12:19 AM
သို့ ညီမ Tsu အတွက် ကွန်မန့်အချို့ ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကွန့်မန့်ရေးသူအတွက် notification က မရှိဘူးထင်ပါရဲ့။ ဘလော့ဂါအတွက်တော့ ကွန်းမန့် အသစ်တက်တိုင်း gmailမှာ notification လုပ်ပေးပါတယ်။
T T Sweet March 7, 2012 at 12:48 AM
Evy March 7, 2012 at 1:10 AM
တီဆွိရော ဦးခြိမ့်ပါ ၂ ယောက်စလုံးချောကြတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘ၀လေး။ သတို့သားလောင်း ရီနေပုံကို သဘောကျ၏ :D :D
သက်ဝေ March 7, 2012 at 1:37 AM
ပျော်စရာ အမှတ်ရစရာ... ပြီးတော့ ကြည်နူးစရာ...း)))
ကွန့်မန့်မရေးနိုင်တာုကာလှပြီနော်၊ ကျမကိုမှတ်မိသေးလား၊ နှင်းထဲမှာ ချော်လဲပြီး ကျောက်ပတ်တီးနဲ့မို့နော်၊ လာတော့ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် အမရေ၊ အမက ငယ်ငယ်ကလဲ ချောတယ်၊ုကီးတော့လဲ ချောနေတုန်းးပဲ၊ ပြီးတော့ သာယာတဲ့မိသားစုဘ၀လေးကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်၊ ၀မ်းသာပါတယ် မဆွိရေ၊ ဟင်းချက်နည်းတွေ အားရင် တင်အုံးနော် အမ၊ အမလက်ရာမြင်ရင် ဗိုက်ဆာတယ်၊ အဲ လုိုက်ချက်လိုက်ရင်တော့ အမလို စားမကောင်းပါ၊ လေးစားလျက်
ဇွန်မိုးစက် March 7, 2012 at 2:16 AM
အစ်မရေ ဖတ်ရတာ တကယ့်ကို ကြည်နူးစရာပါပဲ။း)
NSA March 7, 2012 at 2:38 AM
သွားတွေ အကုန်ပေါ်အောင် သိပ်မပျော်တဲ့ သတို့သား.
San San Htun March 7, 2012 at 2:59 AM
ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ် တီဆွိရေ..ဦးခြိမ့်ရော၊ တီဆွိရော ချောတယ်..
kay March 7, 2012 at 3:18 AM
အရင်းရော အတိုးရော ပေါင်းပြီး ပျော်လိုက် ပေ့ါ..တီဆွိရေ
ရင်ခုန်စရာ အမှတ်တရလေးတွေ ဖတ်သွားပါတယ် ..တီတီဆွိ
အချိန်ရရင် ဟင်းချက်နည်း အသစ်လေး တွေ တင်ပေးပါဦးနော်..
PhyoPhyo March 7, 2012 at 9:23 AM
ဦးခြိမ့် က ဒီလိုပဲ လက်ထပ်ရမယ်လို့ အကျပ်ကိုင်တာပေါ့။
တီဆွိလည်း ကံကောင်းတယ်၊ ဦးခြိမ့်လည်းကံကောင်းတယ်၊
ပြန်လှည့်ပြေးချင်တဲ့ ဦးခြိမ့်ရယ်နေလိုက်တာများ :)
တီတီဆွိ ချစ်ချစ်ကြီး မင်ဂါဆောင်နေ့မှာရယ်နေပုံ အသက်ပါဆုံးပဲ...ဟီးးဟီးးး...ပုံကတော်တော်အသက်ပါတယ်...ဒီလိုစာတွေဖတ်ရတာ အားရှိတယ်...(ဒို့များလည်းအားကျပါရဲ့မင်းလိုပါကွယ်...) ဒီက စင်္ကာပူ ၅၅၀၀ အကြွေးတင်ပြီးစခဲ့တာ...အေးဂျင့်ကြေးလေ...ခုတော့လည်း သားတယောက်အဖတ်တင်..ဘ၀ကကျေနပ်စရာကြီးးး (မကျေနပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေ...ဟီးဟီး)
ဦးခြိမ့်.. သင်္ဘောဆင်းလာတဲ့ယာက်ဖကို ကျေးဇူးတင်
တီတီဆွိ ရေ...... ခုချိန်မှာတော့ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ကြည်နှုးစရာလေးတွေပေါ့နော်။ သမီးလည်း မေလထဲမှာ မင်ဂလာဆောင်တော့မှာလေ။ အခုကတည်းက အနှုတ်တွေနဲ့ မို့ စိတ်လည်းညစ်.......ပျော်လည်း ပျော်ပေါ့။ ချစ်ချစ်ကတော့ အားပေးရှာတယ်။ အဆင်ပြေသွားမှာပါတဲ့။ တီတီဆွိ ရဲ့ အနှုတ် ၈၅၀ ကိုဖတ်ပြီး အားပြန်ပြည့်သွားပါပြီ။
အမနဲ့ဦးခြိမ်.တွေ.ကျပုန်ကအရန်းခေတ်ဆန်တယ်.. အခုခတ်လိုပျော်ရင် chatting မှာတွေ. ကြတာပေါ. စိတ်ဝင်စားစရာ...
Shinlay March 8, 2012 at 1:01 AM
ရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာ...ချစ်သောသူများနှင့် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အတူတကွ.....
sosegado March 8, 2012 at 2:24 AM
သတ္တိကိုချီးကျုးပါ၏၊ သံသရာအကြွေး ကိုမောင်ခြိမ့်တွင် ပါလာတော့လဲ ဆပ်ရတာပေါ့၊
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 8, 2012 at 3:32 AM
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးနေမိတာ ...
ပြီးတော့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်တာလည်း ချီးကျူးမိပါရဲ့
သူများတွေကို အားကျလာအောင်ကို ရေးနိုင်ပါပေတယ်
တကယ် အားကျသွားတယ်း)
ပြီးတော့ အစ်မက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်
tin min htet March 9, 2012 at 1:47 AM
ဖတ်ပြီးသွားပြီ အမ။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေး အရင်းအတိုင်းရေးထားတာ။ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ ပုံတွေကတော့ ကျော်သူ မို့မို့မြင့်အောင် အဖြူအမဲကားထဲက ပုံမျိုးတွေပေါ့ :)))
tin min htet March 9, 2012 at 1:52 AM
တီတီဆွိတို့ အိမ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဆင်ခေါင်းကြီးကရော ရန်ကုန်က တခါတည်း သယ်လာတာလား၊ ဒီရောက်မှ သွားဖြတ်လိုက်တာလား :P
မမိုး March 9, 2012 at 8:09 AM
သိပ်အားကျစရာကောင်းတဲ့ ဘ၀လေးပါ တီဆွီရေ..
ပြကာသနမပါဘဲ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ..ဦးခြိမ့် တီဆွီလက်ကိုကိုင်ထားပြီး
T T Sweet March 13, 2012 at 10:55 AM
ကိုကိုထက် အဲ့ဆင်ခေါင်းကြီး အော်ဇီ မပြောင်းခင် ကိုကိုထက်တို့အိမ်ပေးထားခဲ့တာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါရဲ့လားး) ဟိုနေ့ကတော့ ဟင်းချက်ရင်း အွန်လိုင်းတက်နေရတယ် ကြားတာပဲ ...း)
မြသွေးနီ March 13, 2012 at 5:04 PM
အလုပ်ပိနေလို့ မြသွေး အခုမှရောက်တော့တယ်...
အောင်မြင်တဲ့ မိသားစုဘ၀ရဲ့အစက တကယ့်ကို ရိုးရှင်းပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုအတိနဲ့...။
ဦးခြိမ့်ရဲ့ မျက်နှာက ရိုးဂုဏ်ပေါ်တယ်။ အစ်မဆွိက ဟာသဇ၀နဥာဏ်နဲ့ ဖြူစင်သူ။
ချစ်စရာ ဂျူဂျူလေးက ဒီဖေဖေမေမေရဲ့ အသည်းကျော်သမီးလေး...။
T T Sweet March 13, 2012 at 5:32 PM
ဟုတ်တယ် မြသွေးတစ်ယောက် မတွေ့ပါလားလို့ ထင်နေတာ။ အစ်မလဲ ခုတစ်လော ဘယ်မှ သိပ်မရောက်ဖြစ်တော့ မြသွေးတို့ကို တွေ့တိုင်း သိပ်အားနာတာပဲ။ လာလည်ဦးမယ်။
phyu March 13, 2012 at 11:14 PM
yuki March 14, 2012 at 3:05 PM
တီဆွိ ငယ်ငယ်က ပိုးဒါလီသိန်းတန်နဲ့ တော်တော်တူတယ်နော်..ချစ်စရာလေး..ဖတ်ရတာနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာလေးတွေကူးတယ်..
Botarzan March 14, 2012 at 8:35 PM
ကျေးဇူးဗျို့ .. ဖတ်ကောင်းတယ်။
အဟိ .. ဖွချင်တာလေးလည်း ဖွလို့ရပြီ .. :P
T T Sweet March 14, 2012 at 8:42 PM
အမယ်လေး မီးမီးကြောက်ကြောက်။ ဖွတော့မယ်တဲ့။ အစက မချစ်ခဲ့မိရင် အကောင်းသား ... အဲလေ အစက လင့်ခ်မပေးခဲ့မိရင် အကောင်းသားး)
ဒီဘလော့ကို ပုံမှန်ဖတ်ပေမယ့် တခါမှ မရေးခဲ့ဘူးပါ ...
ဒီထက်ရှေ့ဆက်ပြီး သားသမီးမြေးမြစ်အဖြာဖြာနဲ့ နှစ်တစ်ရာတိုင် ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ ...
အစ်မရေ ဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်တောင်လည်တယ်... ဘ၀ရဲ့ချိုမြိန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ဟောင်းတွေက အရမ်းကြည်နူးမူပေးစေတယ်...